LUUQADII FSND Saab 340 FSX - Rikoooo
downloads 23 808
100% la jaan qaada FSX SP2. Dareenka sare, VC gabi ahaanba way shaqeynayaan, dhaqdhaqaaqa duulimaadka iyo hawlgallada waa run. Gudaha ayaa gebi ahaanba dib loo dhisay, kaas oo u oggolaanaya inuu ku dhex wareego guriga qolka dhexdiisa sida rakaabku uga fadhiyo kursigiisa. Animation buuxa oo ka mid ah qaybaha laga saari karo sida jaranjarada galitaanka.
Si fiican u akhri oo dhan waraaqo ka mid ah xirmada this.
Saab 340 waa yar diyaarad ay wadeen laba turboprops iyo usameeyay masaafo diyaarad yar. Waxaa la soo saaray howlgal wada dhexeeya Saab iyo Fairchild Diyaaradaha. Marka dambe waa joogsatay dhaqdhaqaaqa oo dhan, dhismaha oo dhan waxaa ku shaqeeya ee warshadda Saab ee Linköping ee Sweden. Ka dib markii diyaarad ugu horeysay oo bilaabay ganacsi ee 1983, a version fiican qaab-caqliga leh waxaa la soo saaray oo u adeegno in 1989, hoos magaca 340 B. Tani version labaad inta badan faa'iidooyinka motorisation ah oo awood badan iyo madaxbannaani weyn. Ka dib markii unugyada 430 ayaa soo saaray, shirkadda joojiyay wax soo saarka oo dhan 1998, laakiin diyaaradda ayaa weli isticmaalaan shirkado badan oo anteenada dunida oo dhan. (Source Wikipedia)
Xirmooyinka Hawada New Zealand FSX & P3D